Blinken oo qoraal xasaasi ah kasoo saaray is-mari waaga doorashada Soomaaliya iyo dibad-baxyadii Muqdisho - Caasimada Online
Home Warar Blinken oo qoraal xasaasi ah kasoo saaray is-mari waaga doorashada Soomaaliya iyo...
Blinken oo qoraal xasaasi ah kasoo saaray is-mari waaga doorashada Soomaaliya iyo dibad-baxyadii Muqdisho
Washington (Caasimada Online) – Xoghayaha arrimaha dibedda Mareykanka Antony Blinken ayaa qoraalkii ugu kululaa kasoo saaray is-mari waaga siyaasadeed ee Soomaaliya, wuxuuna ku baaqay doorasho deg deg ah oo dalka ka dhacda.
Blinken ayaa sheegay in dowladda Mareykanka ay aad uga walaacsan tahay is-mari waaga siyaasadeed ee Soomaaliya, oo uu sheegay inuu abuurayo hubanti la’aan siyaasadeed oo halis gelinaya amniga, xasiloonida iyo horumarka dalka.
Waxa uu sheegay in is-mari waaga uu waxyeeleynayo horumaradii ay sameysay Soomaaliya islamarkaana uu dib u dhigayo isbeddelada deg degga ah ee ay u baahan tahay Soomaaliya si ay ugu sii socoto waddada ay ku gaareyso deyn cafin buuxda, ayna wiiqeyso la-dagalaanka argagixisada.
Blinekn ayaa sidoo kale taageero u muujiyey dibad-baxyada shacabka Soomaaliyeed ee dowladda ay isku dayday inay hor-istaagto.
“Mareykanka waxa uu taageerayaa xuquuqda ay muwadiniinta Soomaaliyeed u leeyihiin inay si nabdoon u dibad-baxaan, waxa uuna si qayaxan uga soo horjeeda in dhinacna uu rabshado u adeegsado,” ayuu yiri.
“Waxaan ugu baaqeynaa hogaamiyayaasha Soomaalida, inay ilaaliyaan mustaqbalka dalka ayna gaaraan heshiis si deg deg ah loogu fulinayo doorashooyinka baarlamanka iyo madaxweynaha,” ayuu yiri.